Basecamp Inotangisa Project Matemplate | Martech Zone
Basecamp Inotangisa Project Matemplate
Chitatu, October 10, 2012 Douglas Karr
Zvizhinji zvezvatinoita sevashambadziri zvinodzokororwa… kubva kutsvagurudzo nekunyora chinyorwa cheblog, kutsvagisa nekugadzira infographic, kugadzirisa uye kutsikisa vhidhiyo, kukudziridza nekuita mushandirapamwe wekushambadzira. Basecamp ichangobva kuwedzerwa Zvirongwa zvePurojekiti kukushandisa kwayo.
Mune template template, unogona kuseta vanhu uye -kuita zvinyorwa zvekukwidziridza chirongwa ichi nekukurumidza.
Ipapo, iwe unogona kungotanga chirongwa nekuvhura iyo template template uye iwe wabva uye unomhanya!
Isu tinoshandisa Basecamp zuva rega rega pamwe neyedu agency. Chishandiso chimwe chete chandinoshuvira kuve nacho chaive chese To-do runyorwa kwataigona kuisa pamberi muzvirongwa zvedu zvese pane kungoshanda mukati meumwe neumwe wavo.
Tags: Basecamppurojekitipurojekiti template
Wedzera Iframe Breaker kune Yako Saiti
Kubatanidza Kushambadzira kweDhijitari mune Yako Sponsorship
Gumiguru 10, 2012 na4: 38 PM
Kutenda nekugovana Doug! Izvi zvaivepo neyekare vhezheni yeBasecamp,
asi zvinoita sekunge vari kungoburitsa vhezheni itsva. Zviri
uri kushandisa? Hauna kuona toni yemhinduro yakanaka pane iyo nyowani vhezheni.